သိန်းတစ်သောင်းခွဲထီဆုကြီး ကံထူးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ယုန်လေး – Suehninsi
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ(၁) ရက်နေ့မှာတော့ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးသိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့မှ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တာမွေမြို့နယ်က ကိုကျော်စွာက ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ ကံကောင်းလွန်းတဲ့
သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆီသွားကာ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရင်း ပရိသတ်ကိုပါ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” ဒီနေ့ ထီ သိန်း ၁သောင်းခွဲ ပေါက်ပါပြီ… ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း … ဘာပဲ ပြောပြော ရန်ကုန် ကလူတွေ ကံပွင့်လာပြီ …. ကိုယ်တွေများ (၅) သောင်း
ဆုကို (၂) နှစ် နေလောက်မှ တစ်ခါပေါက်တယ်…. သူနားနည်းနည်း သွားပြီး ကံကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ လာယူတာ .ဂုဏ် ယူပါတယ် . ကံထူးရှင်ကြီး ကိုကျော်စွာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သိန်း
တစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကတော့ နယ်တွေမှာ အများဆုံးပေါက်လေ့ရှိတဲ့အပြင် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ရန်ကုန်မှာပေါက်ရုံမက သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးက ကံထူးသွားတာကြောင့် ယုန်လေးကတော့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာ မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ဒီနေ့ သွဂုတျလ(၁) ရကျနမှေ့ာတော့ (၁၈) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီကို ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီဖွဈပွီး အမွငျ့ဆုံးသိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကိုတော့ ရနျကုနျမွို့မှ ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ တာမှမွေို့နယျက ကိုကြျောစှာက ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပွီး ယုနျလေးကတော့ ကံကောငျးလှနျးတဲ့
သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးဆီသှားကာ ဂုဏျပွုစကားပွောကွားရငျး ပရိသတျကိုပါ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ” ဒီနေ့ ထီ သိနျး ၁သောငျးခှဲ ပေါကျပါပွီ… ကြှနျတျောမဟုတျဘူး ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး … ဘာပဲ ပွောပွော ရနျကုနျ ကလူတှေ ကံပှငျ့လာပွီ …. ကိုယျတှမြေား (၅) သောငျး
ဆုကို (၂) နှဈ နလေောကျမှ တဈခါပေါကျတယျ…. သူနားနညျးနညျး သှားပွီး ကံကောငျးတဲ့ ဓာတျတှေ လာယူတာ .ဂုဏျ ယူပါတယျ . ကံထူးရှငျကွီး ကိုကြျောစှာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူငယျခငျြးဖွဈသူနဲ့ ပုံရိပျလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ သိနျး
တဈသောငျးခှဲဆုကွီးကတော့ နယျတှမှော အမြားဆုံးပေါကျလရှေိ့တဲ့အပွငျ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ရနျကုနျမှာပေါကျရုံမက သူငယျခငျြးအရငျးကွီးက ကံထူးသှားတာကွောငျ့ ယုနျလေးကတော့ ဝမျးသာဂုဏျယူစှာ မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
Source : Yone Lay | Reference & Credit : Cele Gabar